DAAWO SAWIRRO: Al-Shabaab oo Soo Bandhigay Ergooyinkii soo xulay Xildhibaanada | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Al-Shabaab oo Soo Bandhigay Ergooyinkii soo xulay Xildhibaanada
Buq-Aqable (Halqaran.com) – Ururka Al-Shabaab ayaa soo bandhigay qaar kamid ah Ergooyinkii soo xulay Xildhibaanadda Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya,kuwaasi oo qaatay amarkii ahaa in ay isu soo diiwaangaliyaan muddo kooban.
Warbaahinta maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa baahisay kulan dhexmaray Gudoomiyayaasha Al-shabab ee Goboladda Shabeelaha Dhexe,Hiiraan,Mudug iyo ergooyinkii soo xulay Xildhibaanadda Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya kaasi oo ka dhacay Degmadda Buq Aqable ee Gobolka Hiiraan.
Mas’uuliyiinta Al-shaabab ayaa sheegay in cafis loo fidiyay Odayaasha towbad keenay ee lagusoo bandhigay degmada Buq Aqable.
Maamulka Hirshabelle waxaa ka yimid 53 Oday halka maamulka Galmudug ay ka yimideen 33 Oday dhaqameed oo dhammaantood kamid ahaa kuwii soo xulay Xildhibaannada baarlamaanka DF-ka.
Qaar kamid ah odayaashii lagusoo bandhigay degmada Buq Aqable ayaa u mahad celiyay Al Shabaab soo dhoweynta diirran ee ay usameysay waxayna ballan qaadeen in haddii ay ku laabtaan deegaannadii ay ka yimideen ay dadka ku baraarujin doonaan ku dhaqanka shareecada islaamka.
Ergooyinka Xildhibaanada soo xulay